फेसन समाचार अपडेट - कोसी अनलाइन | Koshi Online
१० लाखको मोतीजडित मास्क !
विराटनगर । संसार यतिखेर कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको छ । साबुन–पानीले नियमित हात धुने तथा बाहिर निस्कँदा अनिवार्यरुपमा मास्क लगाउने सल्लाह विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलगायतका संस्थाहरु दिइरहेका छन् । भन्न
विराटनगर, ११ मंसिर । अधिकांश मानिसहरू जाडोको महिनामा लगाएको पहिरनले आफुलाई फेसनेबल नबनाएको सोच्ने गर्छन् । चिसो हुने कारण जाडो महिनामा शरीर ढाक्ने गरी पहिरन लगाउनु आवश्यकता हो । शरीर पुरै लुगाबाट धाकि
अध्ययनको निष्कर्ष : नयाँ लुगा लगाउनु हानिकारक हुन सक्ने
शुक्रबार, ०६ मङ्सिर, २०७६
विराटनगर, ६ मंसिर । नयाँ लुगाहरू स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हानिकारक हुने गरेको पाइएको छ । स्टोकहोम युनिवर्सिटीद्धारा गरिएको अनुसन्धानले नयाँ लुगाले शरीरमा हानिकारक विषादी समेत प्रवेश गराउन सक्ने कुराको
सोमबार, १८ कात्तिक, २०७६
विराटनगर, १८ कात्तिक । विदेशीहरू तथा आधुनिकताको सिको गर्दै अहिले नेपालमा समेत च्यातिएका, कोतरिएका, टालेका लुगा लगाउने चलन बढेर आएको देख्न सकिन्छ । यस्ता कपडा उत्पादन गर्ने क्रममैै च्यातेर, कोतरेर बनाउ
नो सेभ नोभेम्बरमा यसरी गर्नुहोस् दाह्री तथा अनुहारको हेरचाह
विराटनगर १६ कात्तिक ।नोभेम्बर महिना लागेसंगै नो सेभ नोभेम्बर’ अभियान विश्वभरी शुरु भएको छ । के तपाईं यसमा भाग लिने सोच्दै हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने, यस महिनामा छाला र दाह्रीको ख्याल राख्नका लागि य
यस्तो पहिरनबाट देखिन सकिन्छ दसैमा अरुभन्दा आकर्षक
मङ्गलबार, २१ असोज, २०७६
हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको महानचाड बडादशैँ नेपालीहरुले अहिले निकै हर्ष उल्लासका साथ मनाईरहेका छन् । दशैँ आफन्तसंगको मेलमिलापको पर्व तथा राम्रो लगाएर मिठो मैस्नो खाएर घुम्नको पर्व पनि हो । विशेष गरी दशैँक
दसैंमा स्टाइलिस र आकर्षक देखिन अहिले चलेको पहिरन
विराटनगर १८ असोज । चाडपर्वको समय सुरु भइसकेको छ । हरेकलाई चाडपर्वको अवसरमा स्टाइलिस र स्पेशल देखिन मन अवश्य हुन्छ । धेरैले चाडपर्वमा आफन्त तथा मेला घुम्न जानका लागि विभिन्न पहिरनको छनौट गरिसकेका छन् र
विराटनगर, १६ असोज । युवती तथा महिलाहरू धेरैजसो पार्टी तथा चाडपर्वमा साडी नै लगाउन रुचाउँछन् । साडी लगाउँदा सबैभन्दा अगाडि ध्यान दिनुपर्ने भनेको त्यसमा लगाउने ब्लाउज हो । यदि, कुनै पनि महिलाले साडीको स
शरीरको यस्तो भागमा कोठी हुने व्यक्तिको कहिले टिक्दैन पैसा
विराटनगर, ८ असोज । शास्त्रमा लेखिएअनुसार मानव शरीरका विभिन्न भागमा रहेको कोठीको फरक फरक अर्थ हुने गर्छ । त्यस्तै, शरीरका केही यस्ता भागहरू हुन्छन् जहाँ कोठीआएमा पैसा नटिक्ने विश्वास गरिएको ज्योतिष शास
विराटनगर, ३० भदौ । एक्काइसौं शताब्दीमा आएर अहिलेको जमानामा मोबाइल तथा फोन प्रयोग नगर्ने व्यक्तिहरू निकै कम नै होलान् । फोन आउँदा हरेक व्यक्तिले फोन उठाउने बित्तिकै पहिलो ‘हेल्लो’ भनेर जवाफ दिने गर्छन्
केश अर्थात् कपाल महिलाहरुकालागि मात्र नभएर पुरुषहरुको सौन्दर्यको पहिचान हो । महिला होस् वा पुरुष दुवैको व्यक्तित्व विकासमा कपालको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कपालले सामान्य देखिने मानिसलाई पनि आकर्षक
विराटनगर । महिलाहरु मात्र नभएर पुरुषहरु पनि आफुलाई कसरी आकर्षक र सुन्दर बनाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न उपायहरु अपनाइ रहेका हुन्छन । राम्रो लुगा लगाउने, कपालका विभिन्न डिजाइन र अनुहारलाई पनि सक्दो राम्रो द
विराटनगर । घरबाट बाहिर निस्किनु अघि हामीहरु जहिले पनि परफ्युमको प्रयोग गर्छौ । झन् गर्मीको महिनामा पसिना धेर आउदा वा पसिना गनाउने मानिसहरुको लागि परफ्युम नभई हुदैन । पसिनाले गर्दा शरीरमा आउने गन्ध तथ
सुन्दर बनाउने मस्काराले कतै आँखालाई हानी त गरिरहेको छैन् ?
शनिबार, ०७ असार, २०७६
विराटनगर । धेरै जसो महिलाहरुले हरेक दिन सुन्दर देखिनका लागि मेकअप गर्ने गर्छन् । तर, धेरै जसो महिलाहरुलाई मेकअपको राम्रो ज्ञान हुदैन । मेकअपको राम्रो ज्ञान नहुदा हामीले हाम्रो अनुहारलाई सुन्दर बनाउ
विराटनगर । हामीले हाम्रो कपाल स्वास्थ्य राख्नका लागि विभिन्न उपाय हरु अपनाउने गरेका हुन्छौं । चाहे त्यो महँगो श्याम्पू, तेल लगाएर अथवा ट्रितमेन्ट गरेर होस् वा घरमा प्रयोग गरिने विभिन्न घरेलु उपाय ह
अब सुन्दर हुन पार्लर धाईराख्नु पर्दैन, आफै गर्नुहोस् सिम्पल मेकअप
विराटनगर । कुनै महत्वपूर्ण दिन होस् या विवाहको समयमा होस् महिलाहरु जहिले आफुलाई सुन्दर देख्न चाहनछिन् । महिलाहरु सुन्दर बन्नका लागि धेरै पैसा खर्च गरेर पार्लर धाउने गर्छन् । पार्लरले सुन्दर बनाउनुका
फेसनका लागि लगाउने टाइट जिन्सले निम्त्याउन सक्छ रोग
विराटनगर । आजकल फेसनका लागि चाहे केटा अनी केटी जसले पनि जिन्सको पाइन्ट लगाउने चलन छ । अनी राम्रो देखिनलाई पुरै कसिलो पाइन्ट लगाउने चलन बढ्दै गएको छ । राम्रो देखिन होस्, दुब्लो देखिन वा शरीरलाई आकर्षक
बुधबार, ०१ जेठ, २०७६
अहिले मानिसको दैनिक जीवनसँग सबैभन्दा आवश्यक वस्तु बनेको छ, मोबाइल । मोबाइलबिना हामी एकछिन पनि बस्न नसक्ने भएका छौँ । मोबाइलको ब्याट्री सकिँदा चार्ज गर्न केही समय कुर्न पर्छ । एकै पटकमा ब्याट्री चार्ज
यसरी गर्नुहोस् आफ्नो कपालको स्याहार
सोमबार, ०२ वैशाख, २०७६
कपालले मानिसको सुन्दरतामा पनि निकै असर पुर्याइरहेको हुन्छ । त्यसैले मानिसहरू आफ्नो कपालमा विभिन्न खालका मेहन्दीहरू लगाउने गर्छन् । पुरुषको तुलनामा महिलाहरू बढी आफ्नो कपाललाई स्याहार्ने गर्छन् । कपा